भदौ १६ देखि नियमित उडान के होला? अन्यौलमा प्राधिकरण , आशावादी एयरलाइन्स :: Setopati
भदौ १६ देखि नियमित उडान के होला? अन्यौलमा प्राधिकरण , आशावादी एयरलाइन्स
रवीन्द्र शाही काठमाडौं,भदौ १
एयरलाइन्स कम्पनीहरुले भदौ १६ गतेपछि नियमित व्यावसायिक उडान खुल्ने आशमा फेरि तयारी सुरु गरेका छन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरुले उडान तालिका बनाउने तथा बुझाउने काम गरिरहेका छन्।
प्राधिकारणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले एयरलाइन्सहरुले उडानका तीब्र इच्छा देखाइरहेका छन्। आन्तरिक उडानका लागि एयरलाइन्सले धेरै जोड दिएका छन्।
नेपाली बजारको सबैभन्दा ठूलो एयरलाइन्स बुद्ध एयरले आइतबार नै तालिका पेश गरेको प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
एयरलाइन्सहरुले व्यावसायिक उडानका लागि तालिका बुझाएको यो पहिलोपटक होइन। चैत ११ देखि भएको लकडाउनपछि उनीहरुले यसअघि भदौ १ देखि उडान गर्ने तालिका पनि प्राधिकरणमा बुझाएका थिए।
तर सरकारले भदौ १ देखि खोल्ने भनि गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै भदौ १६ अघि उडान नखोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा भने भदौ मसान्त अघि नाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमित व्यावसायिक उडान नखोल्ने सर्कुलर गएको छ।
सरकारको घोषणा एक, निर्णय अर्कै भएको अहिलेको अवस्थामा उडान खुल्ने सम्भावना कति छ?
बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वस्नेत व्यावसायिक उडान नखोल्ने बिकल्प अब सरकारसँग बाँकी नरहेको बताउछन्।
'संसारभर कोभिड १९ बाट प्रभावित देशहरुमा पनि निश्चित समयपछि आन्तरिक वायुसेवा खोलिएको छ।अर्थतन्त्र चलायामान बनाउन तथा आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि वायुसेवा सजिलो माध्यम हो। यस्तोमा अझै प्रतिबन्ध लम्ब्याउने सुविधा अब सायद सरकारसँग पनि बाँकी छैन होला' वस्नेतले भने।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल भने सरकारले अहिलेसम्म भदौ १५ अघि उडान नखोल्ने भनेर दिएको निर्देशन बाहेक अरु केही नआएकाले भदौ १६ पछिको उडानको तयारी गरिरहेको बताए।
'हामीसँग अहिले भदौ १५ सम्म उडान नखोल्ने आदेश छ। त्यहीअनुसार तयारी गरिरहेका छौ।त्यसपछि बीचमै सरकारको निर्देशन जे आउछ त्यहीअनुसार अघि बढ्छौ' पोखरेलले भने।
पोखरेलले त्यसो भनेपछि कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रमा पर्यटन मन्त्रालय बाहेक अरु सबैका निकायका प्रतिनिधिहरु उडान खोल्ने पक्षमा छैनन्।
बुद्धका प्रबन्ध निर्देशक वस्नेत भने उडान खोल्नैपर्ने र त्यसको सुरुवातको मोडालिटी बरु फरक बनाउन सकिने बताउछन्।सडक यातायातको तुलनामा हवाइ यातायात तुलनात्मक रुपमा सहज र सुरक्षित भएकाले पनि सरकारले खोल्नैपर्ने उनको बुझाइ छ।
'संक्रमण नै हुन नदिने त कुरा होइन। तर फैलिन नदिने सबैको प्रयास हो। यसका लागि वायुसेवा तुलनात्मक रुपमा सहज माध्यम हो। हामी संकास्पद यात्रुलाई प्रवेश दिदैनौ सुरुमै। त्यसपछि केहीगरी कोही संक्रमित भएमा पनि त्यसबाट फैलिन नदिनका लागि हरेक प्रोटोकल लागू भएकै हुन्छन्' उनले भनेु' केही गरी कुनै यात्रुमा संक्रमण रहेको देखिएमा सम्पर्क पछ्याउनका लागि पनि डिटेल डेटाबेस पनि हुन्छ।'
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबारमात्र लकडाउन समाधान नभएको बताएका छन्। मन्त्रीले नै लकडाउन समाधान नभएको बताइरहेका बेला सेप्टेम्बर १ देखि उडान खुल्नेमा आफू विश्वस्त भएको वस्नेतले बताए।
उडान खुलेपनि सबैतिर उडान हुन भने कठिन छ। देशका मुख्य सहरहरु जुन मुख्य हवाइ गन्तव्य हुन् त्याँ निषेधाज्ञ निरन्तर थपिंदै गएको छ।
पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका मुख्य सहरमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। यस्तोमा स्थानीय सरकारहरुले कर्फ्युसमेत लगाइरहेका छन्। उडान खुलेपनि त्यस्ता गन्तव्यमा उडान भने हुने छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका व्यावसायिक उडान नखुलेपनि सरकारले उद्धारका लागि भन्दै चार्टर्ड उडानलाई भने निरन्तरता दिएको छ। यसमा नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स तथा अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरुले नियमित उडान गरिरहेका छन्।
चार्टर्ड उडानमा सिमित ट्राभल एजेन्सीहरुकोमात्र बर्चस्व तथा व्यवसाय हुने भएकाले आखिर मान्छे ल्याउने नै भएमा नियमित उडान खोल्नुपर्ने व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीकाअनुसार मन्त्रालयबाट उडान खोल्नका लागि प्रस्ताव लिएपनि सिसिएमसीमा नखोल्नेहरुको बर्चस्व हुने भएकाले अनिश्चित रहेको बताए।
'हामीले त अलि पहिले नै चार्टर्ड उडान विवादित भयो यसमा नियमन गर्न सकिएन। बरु सुरक्षाका प्रोटोकलमा कडाइ गरौ तर उडान खोलौ भनेर प्रस्ताव लिएको हो। तर त्यहाँ अरुले मान्ने अवस्था छैन' ती अधिकारीले भने।